Deltarune Chapter 2: Ahoana no hahitana ny lehiben'ny miafina | la-manette.com
Deltarune Chapter 2: Ahoana no hahitana ny lehiben'ny miafina
6 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Tahaka ny ao amin'ny Toko 2, ny mpilalao dia mety hahita lehiben'ny tsiambaratelo sarotra ao amin'ny Toko XNUMX amin'ny Deltarune raha vonona ny handray ny dingana ilaina izy ireo.
Ny toko faharoa amin'ny Deltarune dia azo alaina maimaim-poana. Maka ny tantara mivantana avy amin'ny faran'ny toko voalohany. Tahaka ny toko voalohany, ity fizarana vaovao ity dia feno tsiambaratelo miandry ny ho hita ary manondro zava-miafina lehibe kokoa.
Ny iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny toko voalohany amin'ny Deltarune izay nahasarika ny sain'ny mpilalao dia ny lehiben'ny miafina, Jevil. Na dia tsy hita ao amin'ny Toko 2 aza dia misy lehiben'ny miafina hafa azon'ny mpilalao atrehin'izy ireo raha manaraka ny dingana mety izy ireo. Na izany aza, ity tompon'andraikitra miafina ity no fanamby mafonja indrindra amin'ny toko, izay mety hiteraka tsy fahampiana maro.
HAFA: Sims 4 Cheats, Codes Cheat & Walkthroughs ho an'ny PC-nao
Ireo mpilalao dia afaka mamita ny dingana ilaina mba hahatongavana amin'ny lehiben'ny miafina raha mbola ao amin'ny Tontolo maizina izay hita ao amin'ny laboratoara informatika. Noho ny toetran'ity lehibeny ity dia horesahina ireo mpandroba kely, satria ny fepetra manokana dia ampahany amin'ny fivoaran'ny tantara lehibe amin'ny Toko Faharoa.
Ny tsipìka manga voalohany
Ny dingana voalohany amin'ny fanokafana ny lehiben'ny miafina dia azo atao ao amin'ny faritra lehibe voalohany amin'ny Toko 2: Cyber ​​​​Field. Manomboka eo amin'ny sampanan-dalana misy ny fidirana amin'ny tanànan'i Deltarune dia tsy maintsy miantsinanana ny mpilalao. Raha tokony handeha mivantana any amin'ny faritra isorohana ny bala amin'ny efijery sarintany manaraka, dia mila mianavaratra mankany amin'ny faritra sarintany hafa ny mpilalao.
Ao amin'ity sarintanin'ny avaratra ity dia misy toetra mitovitovy amin'ny totozy antsoina hoe Hacker. Angataho ny mpilalao hahita ireo marika marika manga telo hita ao amin'ny Cyber ​​​​Field. Amin'ny fanaovana izany dia hanampy ilay mpilalao izy any aoriana any amin'ny toko momba ny lehiben'ny tsiambaratelo.
Ny mari-pamantarana manga voalohany dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fialana amin'ny faritry ny piraty, miantsinanana amin'ny alàlan'ny fizarana fivilian'ny bala voalohany, fa mianatsimo fa tsy mandeha amin'ny fizarana fivilian'ny bala faharoa. Izany dia hitarika ny mpilalao ho any amin'ny faritra misy Tasques maro vonona hiady. Rehefa mivoaka eo amin'ny farany ambany atsinanan'ny efijery ny mpilalao dia hahita tratra misy hato-tanana mamirapiratra sy marika marika manga voalohany.
Ilay mpanamory manga faharoa
Ny mpanazatra faharoa dia eo amin'ny faritra miaraka amin'ireo fitetezana dite telo samihafa. Raha ny iray amin'izy ireo no mitondra any amin'ny toerana tokony handrosoan'ny mpilalao, ny iray hafa dia mitondra mankany amin'ny marika marika manga faharoa.
Vakio ihany koa: Pokémon Unite - Rafitra filaharana: Ahoana no hamahana ny lalao laharana sy ny fomba fiasan'ny rafitra laharana.
Amin’ireo kapoaka telo, ny iray eo afovoany no hitarika ireo mpilalao ho any amin’ny mpanazatra. Mba hidirana amin'izany, ny mpilalao dia tsy maintsy manodina ny falifaly mba hifandraisan'i Kris amin'ny zana-tsipìka rehefa miakatra ny vondrona. Susie na Ralsei mamely ny zana-tsipìka dia tsy ho isaina, ary ny merry-go-round hiverina any ambany rihana raha misy mpilalao tsy afaka ny iray amin'ireo zana-tsipìka. Eo an-tampony dia misy tratra misy ny marika faharoa.
Ny tsipika manga fahatelo
Ny mari-pamantarana manga farany dia azo jerena amin'ny alàlan'ny mitaingina ny kaopy dite ankavia mihodinkodina ary mamely ny zana-tsipìka rehetra miaraka amin'i Kris, mitovitovy amin'ny kaopy dite afovoany merry-go-round. Raha tokony ho tratra, izany dia hitarika ny mpilalao amin'ny a Ve? izay tokony hanoratana ny "GIASFELFEBREHBER". Tsy misy dikany mazava io fehezan-teny io ary toa famehezana fanalahidy.
Na dia mety hampatahotra ny piozila aza ny toetra tsy mitombina amin'ny teny hoe "fanalahidy", dia mora voavaha izany raha maka fotoana ny mpilalao. Ny litera manaraka ho an'ny fidirana tsirairay dia matetika hita eo akaikin'ny fanalahidy ijoroan'ny mpilalao amin'izao fotoana izao, ary ny mpilalao dia afaka miala amin'ny fitendry ihany koa mba hahazoana taratasy hafa. Amin'ny fanoratana ny andian-teny, ny mpilalao dia mahazo ny mari-pamantarana manga farany.
Rehefa avy nahazo ny baoritra manga rehetra, ny mpilalao dia tsy maintsy miverina any amin'ny piraty, izay toa ny hany valisoa ho an'ity fikatsahana lafiny ity dia afomanga. Lavitry ny hany valisoa izany, satria miverina any aoriana any amin'ny toko ilay piraty.
Tadiavo ny andalana miafina ao amin'ny lakaly
Raha mamita ny Pirate Side Quest ny mpilalao dia hiseho amin'ny toerana roa samihafa ao amin'ny Lapan'ny Mpanjakavavy izy. Rehefa avy nihaona tamin'ny mpitantana ny La Tasque, ny efitrano manaraka ao amin'ilay tranobe dia hanana tohatra sy lalana misy fiara manatona. Ny tohatra dia mitondra mankany amin'ny fivoaran'ny tantara ary azo tsidihana amin'izao fotoana izao, noho izany dia mila mampiasa ny bokotra fiatoana isan-karazany ny mpilalao mba hanamaivanana ny fifamoivoizana mandritra ny fotoana fohy mba tsy ho voadona.
Rehefa avy nandalo ny fiara rehetra, ny mpilalao dia ho afaka mankany amin'ny fivoahana atsinanan'ny efitrano. Rehefa tonga amin'io fivoahana io dia hijanona mandrakizay ny fifamoivoizana ao amin'ny efitrano, ka tsy mila manao piozila bokotra fijanonana intsony ny mpilalao isaky ny te hiampita ny efitrano manomboka izao.
Ny efitra atsinanana dia feno sarivongana isan-karazany momba ny mpanjakavavy, latabatra, takelaka ary fanaovan-jiro. Raha efa vita ny fikatsahana an-daniny teo aloha, dia tokony ho hita eo amin'ny efitrano ihany koa ilay piraty. Raha miresaka aminy ianao, dia ho fantatrao fa mahafantatra andalan-tsoratra miafina any amin'ny toerana iray ao amin'ny efitrano izy.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hahazoana pass maimaim-poana amin'ny PUBG Mobile Lite
Mba hahitana azy, ny mpilalao dia tsy maintsy mijery azy mandehandeha manodidina ny efitrano ary mijery ny fiovan'ny bikan'ny vatany, izay manomboka amin'ny cursor totozy mahazatra mankany amin'ny cursor totozy azo kitihina. Ny toerana misy azy dia misy ny bokotra izay manokatra ny andalan-tsoratra miafina ao amin'ny lakaly. Tsindrio eo mba hanokafana azy roa sy hitsin-dàlana mankany amin'ny faritra lehibe amin'ny tranobe.
HAFA: Ny lalao PS Plus maimaim-poana amin'ny Novambra 2021 dia misy lohateny 6, saingy tsy misy lalao lehibe
Sokafy ny lakaly
Raha misy ny fidirana amin'ny lakaly amin'izao fotoana izao, dia mbola mihidy ihany koa ny lakaly. Mba hidirana amin'izany dia tsy maintsy mahazo singa iray antsoina hoe Gen-Key ny mpilalao. Ity entana ity dia azo vidiana amin'ny fivarotana miafina tantanan'ny mini-boss antsoina hoe Spamton, tany am-piandohan'ny toko.
Raha te hahita ny fivarotana Spamton, ny mpilalao dia tsy maintsy mandalo amin'ny varavarankelin'ny tranobe mankany amin'ny faritra fako. Mizotra mankany amin'ny ilany havia amin'ny varavarana amin'ny sarintany manaraka ary mandeha mianavaratra amin'ny lavaka eo amin'ny rindrina, ny mpilalao dia ho tonga any amin'ny fivarotana iray izay i Kris irery ihany no afaka miditra. Ity ny fivarotana Spamton, toerana feno lahatsoratra sy zavatra manjavozavo. Iray amin'ireo entana amidin'i Spamton ny Key-Gen. Na dia lafo aza izy io, dia miova hatrany ny vidiny, ka tokony hiezaka hatrany hividy azy ireo mpilalao mandra-pahatongany amin'ny vidiny azony.
Rehefa avy nahazo ny Key-Gen, niresaka tamin'i Spamton, dia hangataka an'i Kris haka kapila avy ao ambadiky ny lakaly ilay mpivarotra ary hamerina azy any aminy. Miaraka amin'ilay entana vao novidina eny an-tanana, afaka manao ny dingana manaraka ny mpilalao.
Avereno indray ny kapila
Mandeha any amin'ny lakaly i Kris, tsy hamela an'i Susie na Ralsei hanaraka azy ireo. Misy sahan-kery manakana ny lalana atsinanana, ka tsy maintsy mandeha amin'ny lalana andrefana ny mpilalao. Hisy ny loza mety hanimba ny fahasalaman'i Kris raha tsy mitandrina tsara ny mpilalao. Na dia tsy voatery hiady irery aza i Kris amin'ity fizarana ity, ny mpilalao dia mila miaro ny fahasalaman'i Kris araka izay azo atao eo anelanelan'ny famonjena.
Ao amin'ny efitra ankavia indrindra amin'ny lalantsara no toa efitra tsy misy na inona na inona amin'ny voalohany. Na izany aza, hisy teacup merry-go-round hiseho ary hitondra an'i Kris tena lalina ao amin'ny efitrano misy ny switch mba hanesorana ny sahan-kery. Eo no manomboka ny fanamby.
Vakio ihany koa: Ahoana no hamahana ny olana rehefa tsy mandeha ny AirPod tokana
Rehefa niditra tao amin'ny ascenseur teacup i Kris, dia miseho eny an-dalana miverina ny lamina mihodinkodina. Raha tratran'ny tsy fitandremana ianao dia mora ho an'ny mpilalao ny hamoy ny fahasalaman'i Kris rehetra. Ny fomba tsara indrindra handosirana dia ny manaraka ny fitarihan'ny baolina. Mety mila fisedrana maromaro izany, noho izany dia zava-dehibe ny mitsitsy aorian'izay sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fahasalaman'i Kris.
Ny lalana vao nosokafana dia hitarika ny mpilalao ho any amin'ny efitrano misy lalamby sy efitrano roa. Rehefa miditra ao amin'ny efitrano atsinanana, ny mpilalao dia hahita tionelina foana sy be dia be ary robot tsy mety. Ao anatin'ity robot ity dia ny disk izay tadiavin'i Spamton.
Tongava amin'ny sefo miafina
Aorian'ny fanangonana ny kapila taloha, ny mpilalao dia tsy maintsy miverina any amin'ny faritry ny fako ary miresaka amin'i Spamton mba hanomezana azy ny kapila. Amin'ny fanekena ny hanome azy ny kapila dia hampitandremana ny mpilalao fa hanakatona ny fivarotany izany ary hahatonga azy tsy hidirana mandrakizay. Noho izany antony izany, ny mpilalao dia tsy maintsy mividy izay tadiaviny alohan'ny hanomezana azy azy.
Aorian'ny fandefasana ilay kapila dia hangataka an'i Kris i Spamton hampiditra ilay kapila ao anaty robot izay hitan'ny mpilalao azy tany am-boalohany. Midika izany fa tsy maintsy miverina any amin'ny lakalin'ny tranobe sy ny robot ianao. Amin'ny alàlan'ny famerenana ny kapila ao anaty robot no hanombohan'ny fihaonana miafina amin'ny lehibeny. Noho izany, ny mpilalao dia tsy maintsy miantoka fa manana tahiry sy fitaovana izy ireo ary voavonjy tsara alohan'ny ady. Sarotra ny ady ary tokony hiomana amin'izany ny mpilalao.
Deltarune: Toko 1 sy 2 dia azo alaina izao PC amin'ny itch.io sy Steam.
Fanjonoana ao amin'ny Impact Genshin: Torolàlana momba ny fotoana hamerenana ny trondro
Ahoana ny fahitanao ny antontan'isa Spotify anao